Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Kicitaanka Qiimaha Kaarboon Gudaha
Maaddaama welwelka isbeddelka cimiladu sii kordhayo, shirkaduhu waxay la kulmaan tallaabooyin adag oo dawladeed oo ciqaabaya inay dhaafaan qiiqa kaarboonka. Ciqaabyadani waxay badanaa ku yimaadaan qaab kharashaad maaliyadeed waxaana caadi ahaan loo yaqaanaa canshuurta kaarboonka.
Shirkadaha qaar ayaa ka soo horjeeda canshuurta kaarboonka.
Qaar kale ayaa ka warqaba sababta canshuuraha loo hirgelinayo waxayna isku dayayaan inay yareeyaan qiiqa.
Hal dariiqo oo caadi ah ayaa ah waxa inta badan loogu yeero qiimeynta kaarboonka gudaha.
Si fudud haddii loo dhigo, qiimaynta kaarboonka waxay la xiriirtaa shirkadaha dejinaya qiimaha lacageed ee qiiqa. In kasta oo qiimahani yahay aragti, waxay wargelineysaa go'aanno badan waxayna ka caawisaa shirkadaha inay noqdaan dhexdhexaad kaarboon.
Layaab ma leh, shirkado badan ayaa qaadanaya fikradda canshuurta kaarboonka. Sida laga soo xigtay Mashruuca Daahfurka Kaarboon (CDP), in ka badan 2,000 oo shirkadood, oo matalaya in ka badan $ 27 tirilyan oo doolarka suuq -geynta suuqa, ayaa shaaca ka qaaday inay hadda adeegsadaan qiime kaarboon gudaha ah ama qorshe ay ku fulinayaan mid ka mid ah labada sano ee soo socota.
Waqtigan xaadirka ah, qiimaynta kaarboon gudaha ayaa ku badan warshadaha adeegga tamarta, maaddada, iyo maaliyadda.
Qiimaynta kaarboonka gudaha waxay u saamaxdaa shirkadaha in ay geliyaan sicir suuq si ay u gudbiyaan kaarboon aad u badan, xitaa marka waxoogaa hawlahooda ah ay hadda ku xiran yihiin siyaasadaha qiimaynta kaarboon dibadda iyo xeerarkooda la xiriira.
Shirkaduhu waxay u isticmaalaan qiimaha gudaha siyaabaha soo socda:
Inay saamayn ku yeelato go'aamada ku saabsan kharashaadka raasumaalka, gaar ahaan marka mashaariicdu si toos ah u saamayso qiiqa, gaar ahaan marka mashaariicdu si toos ah u saameeyaan qiiqa, dhawrista tamarta, ama wax ka beddelka isugeynta ilaha tamarta.
Si loo qiimeeyo, loo qaabeeyo, loona xakameeyo khataraha maaliyadeed iyo maamul ee nidaamyada qiimaynta dawladda ee hadda jira iyo suuragalka ah.
Si lagaaga caawiyo helista khataraha iyo furitaannada oo wax looga beddelo istiraatiijiyad waafaqsan.
Qiimaha gudaha lagu xushay wuxuu u ekaa canshuur kaarboon ama khidmad lagu soo rogay maamulkooda ururada qaarkood. Shirkadaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay ka hawlgalin deegaannada ay ka jiraan siyaasado qiimaynta kaarboonka oo cad.
Qiimayaasha ay soo xuleen shirkadaha adduunka oo dhan aad bay u kala duwan yihiin, iyada oo shirkadaha qaar ay ku qiimeeyaan kaarboonka ugu hooseeya boqolkiiba hal tan. Taa bedelkeeda, kuwa kale waxay ku qiimeeyaan in ka badan $ 100 halkii ton.
Qiimaha kaarboonka la doortay wuxuu ku xiran yahay warshadaha, dalka, iyo bartilmaameedka shirkadda. Kahor intaanan sharxin siyaabaha kala duwan ee shirkaduhu u adeegsadaan qiimeynta kaarboonka gudaha, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo sida ay u go'aamiyaan qiimaha kaarboon.
Cabbira Raadka Kaarboon
Markay timaaddo, shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan faham cad oo ku saabsan qiiqa.
In kasta oo dalal iyo gobollo kala duwan ay qaateen qawaaniin deegaan oo kala duwan iyo qiimayaasha kaarboon, haddana shirkaduhu waxay go'aamiyaan mugga iyo meesha ay ku yaalliin qiiqa CO2 ee tooska ah iyo kan aan tooska ahayn. Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka (EPA) waxay maamushaa warbixinnada qiiqa tooska ah ee shirkadaha tamarta iyo kuwa wax soo saara ee Maraykanka.
Bixinta qiiqa tooska ah ama baaxadda hal qiiqa waxay ka timaaddaa ilo ay shirkaddu maamusho ama ay maamusho-tusaale ahaan, qiiqa ka imanaya gubista laba-kulayliyaha ama maraakiibta baabuurka. Habka aad ula socotid qiiqaas waxay ku xirnaan doontaa isha. Tusaale ahaan, dab -damisyada, waxaad isticmaali kartaa nidaamyada kormeerka qiiqa ee joogtada ah (CEMS) si loola socdo wax soo saarka kaarboon. Falanqeeyayaasha CEMS wuxuu kaloo la socon karaa gaasaska sida NOx, SO2, CO, O2, THC, NH3, Iyo in ka badan.
Baaxadda aan tooska ahayn ee laba qiiqa ayaa ka dhasha koronto shirkad heshay, kulayl, uumi, iyo qaboojin.
Qiiqa kale ee aan tooska ahayn (baaxadda 3) waxay ka dhacdaa silsiladda sahayda ee shirkadda, sida soo saaridda iyo qaadista alaabta la soo iibiyay iyo qashin -qubka. Farqiga u dhexeeya qiiqa tooska ah iyo kan aan tooska ahayn wuxuu tilmaamayaa in xitaa shirkadaha aan ku jirin warshadaha kaarboonka xoojiya ay sidoo kale la xisaabtami karaan qiiqa weyn.
Kaarboon gudaha ah badiyaa wuxuu qaataa mid ka mid ah saddexdaan qaab:
Lacag kaarboon gudaha ah
Lacagta kaarboon gudaha ah waa qiimaha suuqa ee tan kasta oo qiiqa kaarboonka ah oo ay ku heshiiyeen dhammaan waaxyada ururka. Kharashku wuxuu abuuraa kanaal dakhli oo go'an si loo maalgeliyo tallaabooyinka kala duwan ee la qaaday si loo yareeyo qiiqa.
Qiimaha kala duwan ee shirkadaha isticmaala khidmadda kaarboonka gudaha waa $ 5- $ 20 halkii metrik ton. Dejinta qiimaha waxay u baahan tahay in la tixgeliyo arrimo kala duwan oo ku baahsan ganacsiga oo dhan si waafaqsan canshuuraha la qaaday iyo aasaaska sida lacag loo heli karo.
Waxaa jira sifooyin kala duwan oo qiimahan kaarboonka ah, sida naqshadaynta nidaamka gunnooyinka iyo ganacsiga oo ku dayda hababka dibedda sida Qorshaha Ganacsiga Qiiqa ee Midowga Yurub. Lacagta lagu soo ururiyey habkan ayaa inta badan dib loogu maalgeliyaa mashaariicda joogtaynta iyo kaarboonka.
Qiimeynta qiimaha hoosku waa aragti ahaan ama la qiyaasayo halkii ton ee qiiqa kaarboonka. Iyada oo la adeegsanayo habka qiimaha hooska, qiimaha kaarboon ayaa lagu qiyaasey dhaqdhaqaaqyada ganacsiga. Waxaa ka mid noqon kara dib u eegista kiiska ganacsiga, hababka wax iibsiga, ama horumarinta siyaasadda ganacsiga si loo muujiyo qiimaha kaarboon. Kharashka ku xiga waxaa dib loogu wargeliyaa maamulayaasha ama daneeyayaasha.
Caadi ahaan, qiimaha waxaa loo dejiyay heer ka tarjumaya qiimaha mustaqbalka ee la saadaaliyay ee kaarboon. Qiimaha hooska ee habka kaarboonka wuxuu ka caawiyaa ganacsigu inuu fahmo halista kaarboonka kadibna is abaabulo ka hor inta qiimaha hoosku noqon qiimaha dhabta ah. Waxaa laga yaabaa inay fududahay in lagu fuliyo qiimaha hooska meherad dhexdeeda maadaama aysan jirin wax isbeddel ah oo lagu sameeyo qaansheegyada waaxda ama heshiisyada maaliyadeed.
Qiime aan toos ahayn
Qiimaha aan qarsoonayn wuxuu ku salaysan yahay inta shirkaddu kharash garayso si loo yareeyo qiiqa gaaska cagaaran ama kharashka raacitaanka xeerarka dawladda. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa xaddiga ay shirkaddu ku bixiso ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Qiimaha aan tooska ahayn wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada inay ogaadaan oo yareeyaan kharashaadkaan waxayna isticmaalaan macluumaadka la helay si ay u fahmaan raadkooda kaarboon. Qiimaha kaarboon ee aan tooska ahayn wuxuu dejin karaa halbeeg ka hor inta uusan si rasmi ah u soo bandhigin barnaamijka qiimeynta kaarboonka gudaha shirkadaha qaarkood.
Faa'iidooyinka dejinta Qiimaha Kaarboon Gudaha
Dejinta qiimaha kaarboonka gudaha waxay bixin kartaa faa'iidooyin la taaban karo. Waxaa ka mid ah:
Samaynta ka -baaraandegyada kaarboonka ayaa ah udub -dhexaadka hawlaha ganacsiga.
Wuxuu shirkadda ka ilaaliyaa qiimaha kaarboon mustaqbalka
Waxay ka caawisaa shirkadda inay aqoonsato oo fahanto halista kaarboon iyo kaarboon ee meheradda
Fashiliyay-badbaadinta istiraatiijiyadda ganacsiga mustaqbalka
Wuxuu abuuraa maaliyad ilaha tamarta la cusboonaysiin karo
Wuxuu abuuraa miyir gudaha iyo dibaddaba
Wuxuu xal u siiyaa macaamiisha iyo maalgashadayaasha walaacooda ku saabsan isbedelka cimilada
Wuxuu yareeyaa qiiqa kaarboonka
Qiimaynta kaarboonka gudaha waxay u adeegi kartaa sidii aalad wax-ku-dhimis halis leh oo leh faa'iidooyin dhowr ah oo ka baxsan howlaha shirkadda, macaamiisha, iyo bay'ada. Marka la isku daro habab kale, shirkaduhu waxay gacan ka geysan doonaan kor u qaadista isbeddelka kaarboonka hooseeya si weyn.